Amisom oo Xamar ka wadda arrin yaab leh oo ay dadka lacag uga qaadaneyso - iftineducation.com
Amisom oo Xamar ka wadda arrin yaab leh oo ay dadka lacag uga qaadaneyso
iftineducation.com – Baaritaano ay Sameysay Idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho, ayaa lagu ogaaday in Ciidamadda Howlgalka Nabad Ilaalinta Amisom ee ku sugan Magaaladda Muqdisho ay ku lug leeyihiin Koronto si sharci darro ah loogu xeray Dadka, kadibna lacag looga qaadanayo.
Afar Xarun oo ay Amisom ku leeyihiin Magaaladda Muqdisho ayaa siiya Adeega Korontada dadka jaarka la ah, ayaga oo ka qaatay lacag bil walba ah, sida Baaritaanka uu muujinayo.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa ka hela Amisom Korontada Sharci daradda waxana ay sheegeen dadkasi iney bixiyaan 10 ilaa iyo 30 dollar Bil kasta, taasi oo markii la isku geeyo lacag badan oo dheeri ah usoo xareysa ciidanka Amisom.
Garoonka Kubadda Cagta Stadium Muqdisho, Xarunta Xalane, Safaaradii hore ee Mareekanka iyo Hotel Curaba oo ku yaalla Degmadda Xamar Weyne waa goobo kamid ah meelaha la magacabay oo ay Amisom ka siiso adeega Korontada Sharci Daradda dadka deegaanka Muqdisho.
Sixiroole dad badan Kayaabsaday Markii uu Sameyey Waxa Mucjiso (VIDEO)
Kaadida lo’da oo la ogaaday in caafimaad laga helaayo Daawo muuqaalka